Hunhu hweVaporofita Vanhu - Zvinoreva Zvemubhaibheri
sei ichiti ichi chishongedzo hachitsigirwi
unoteedzera sei meseji
nei iphone yangu ichidedera zvisina mutsindo
haigone kuwana control center iphone
Hunhu hweVaporofita Vanhu
Hunhu hwevanhu vechiporofita
Chii chinonzi muporofita zvakadaro?
Muporofita munhu anotaura kuvanhu akamiririra Mwari. Muporofita akazivisa kuda kwaMwari, akasheedza vanhu kuti vadzokere kuna Mwari, akayambira vanhu nezvekutongwa kwaMwari nekuda kwezvinhu zvakaipa zvavakaita. Vaporofita vaiwanzoshandiswa naMwari kuzivisa zviitiko zvaizoitika mune ramangwana. Semuenzaniso, vaporofita vazhinji muTesitamende Yekare vanoparidza nezvekuuya kwaMesiasi.
Muromo kuna Mwari
Vaporofita vacho vaive vanhu vakatanhamara kune rumwe rutivi. Ivo havana kutaura zvavanofunga nezvavanofunga, asi imwe meseji kubva kuna Mwari yenguva yacho. Vakanga vari rudzi rwemuromo kuna Mwari kuitira kuti Mwari vagone kutaura kuvanhu kuburikidza nemuporofita. Kune rimwe divi, vaporofita vaivewo vanhuwo zvavo vane hunhu hwakasiyana.
Semuenzaniso, Amosi aive akachena mufudzi wemakwai, ukuwo Isaya aibva kumhuri yepamusoro. Asi zvisinei nekuti vaporofita vaive vakasiyana sei, chinhu chimwe chakashanda kwavari vese: ndiMwari anovasarudza kuti vataure kuvanhu kubudikidza navo.
Ko vaporofita vaitaura nezvei?
Vaporofita vakashandiswa naMwari kuti vanhu vazive kuti haana kugutsikana nemararamiro avaiita. Isu taigara tichiverenga muBhaibheri kuti vanhu veIzirairi havateereri Mwari, uye muporofita akabva ave nebasa rekuita kuti vanhu vazive kuti vaive munzira isiriyo.
Semuenzaniso, vaporofita vazhinji vakaratidza kuti Mwari acharanga vanhu kana vakasadzokera kumararamiro aifungwa naMwari. Mwari vanoshandisa zvakare vaporofita kukurudzira vanhu munguva dzakaoma. Kana chete vanhu vachivimba Mwari, zvese zvichave zvakanaka.
Haisi basa riri nyore
Vaporofita vazhinji zvirokwazvo zvaisava nyore. Vakataura vakamiririra Mwari, asi meseji kubva kuna Mwari haina kugashirwa chaizvo. Izvi zvakare zvaiwanzo kuve nemhedzisiro kumutumwa. Saka Jeremiah akavharirwa muchizarira nekusekwa. Vanhu vakatadza kukoshesa nekutambira meseji. Mwari anoudza Ezekieri kuti anofanira kutaura kuvanhu, asi Mwari vanobva vangojekesa kwaari kuti vanhu havangamuteereri.
Iyeye Ezekieri anopiwa basa rekuratidzira kuburikidza nezviito zvekufananidzira kuti Mwari haana kugutsikana sei nevanhu. Rudzi rwemitambo yemugwagwa. Anofanira kubika chikafu chake padutu remombe akarara nedivi reruboshwe kwemazuva makumi mapfumbamwe nemakumi matatu uye kuruoko rwake rwerudyi kwemazuva makumi mana.
Nhoroondo pfupi yevaporofita vemuBhaibheri
Pakutanga, tinoona vaporofita vachiita mumapoka . Ivo vanozivikanwa nehembe dzavo (jasi rine mvere uye bhandi reganda, semuna2Madzimambo 128; cf. Mat. 3: 4), vanorarama nezvipo nekufamba-famba. Kuita kwavo kunosanganisira mimhanzi nekutamba, kugadzira mufaro mukati umo muporofita anonzwa kusangana naMwari. Sauro anoitikawo paakasangana nevaporofita (1 Sam. 10, 5-7).
Nekudaro, apo chiporofita cheBhaibheri chinotanga kubva muboka remuporofita kuenda kuna munhu akazvimiririra , rondedzero dzemafaro dzinowira pasi. Muporofita anongotaura kuti Ishe Mwari vataura naye. Iko kutaura kwekutaura kuri pasi zvakanyanya kune zvakataurwa naMwari. Ava vakasurukirwa, vasingachazvinzwisise sevaporofita veboka (ona, semuenzaniso, mhinduro isina kunaka yemuporofita Amosi muna Am. 7, 14), vanoumba chiporofita chekare, icho chinosanganisirawo chiporofita cha rugwaro nekuti vakaita danho rekunyora zviporofita zvavo.
Chinyorwa ichi chinonyanya kuratidzira kupokana nekuramba kwevateereri vevaporofita kutambira meseji yakaunzwa nevamiriri vaMwari (semuenzaniso, kuita kwaIsaya munaIsaya. 8, 16-17). Nenzira iyi mazwi echiporofita akachengetedzwawo kuchizvarwa chinotevera. Izvi zvakasununguka zvakatungamira mukuwedzera kukura kwekunyora kwezvatinoziva iye zvino sevaporofita. Kubva kuichi chiporofita chekare, Mosesi inotariswa kumashure, mushure mekutapwa kweBabironi kwaionekwa semuporofita uye zvechokwadi mukuru pane vese vaporofita, senge munaDhuteronomi 34.10.
Chokwadi, nhoroondo yese yeIsrael inodudzirwa seyakateedzana yevaporofita: kutanga nekuzviratidza-kwavo kwaMwari paGomo reSinai, kwakagara kuine vamiririri, vaporofita, avo Mosesi aive wekutanga (saka: Deut. 18,13- 18). (van Wieringen mapeji 75-76)
Chinyakare chiporofita chinongokura zvizere muIsrael kubva muzana ramakore rechisere. Chero zvazvingava, ndezve vaporofita vane zviporofita uye meseji zvakapihwa. Ivo vanonzi 'magwaro vaporofita'. Muzana ramakore rechisere Amosi naHosea vanoitika kuNorth Israel: Amosi nekutsoropodza kwahwo kunotyisa kwekushungurudzwa kwevanhu munharaunda; Hosiya nekufona kwake kwekuda kwekuvimbika kune kusangana kwekutanga kwaIshe panguva yerenje. Muumambo hwekumaodzanyemba hwaJuda, Isaya anoonekwa nguva pfupi yapfuura. Pamwe chete naMicha, iye anopa dudziro yake yehondo iri kuitwa parizvino namambo weSyria neIsrael kurwisa Jerusarema.
Isaya anopindira mune zvematongerwo enyika, savatungamiriri vake Eria naErisha. Anodana Ahazi uye mushure mezvo Hezekia kuti asavimbe neAsiria neEjipitori, asi muna Jehovha chete. Muna 721 North Kingdom inodonha uye Jerusarema rakombwa. Maporofita aMikai zvakare kupomera mhosva yehuori nekushungurudzwa kwese. Mutauro wake unotonyanya kukunda uya waAmos. Kwaari futi, vimbiso chete yeramangwana reIsrael kutendeka kunaIshe. Zvikasadaro zvese zvinopera mukuparadzwa. Kunyangwe iyo tembere haizoponeswa.
Jerusarema zvirokwazvo rakatarisana nenjodzi muzana ramakore rechinomwe. Huporofita hwaZefaniya, Nahumi naHabhakuki hunotungamira maitiro aya. Asi kunyanya iwo aJeremia, anoitika kusvika hafu yekutanga yezana ramakore rechitanhatu pakati pemadzimambo ekupedzisira aJudha. Zvakare uye zvakare yambiro inogona kunzwika kuti kune mhinduro imwe chete kumatambudziko: kutendeka kuna Ishe. Muna 587 izvo zvisingadzivisike zvinoitika: kuparadzwa kweJerusarema netembere yaro uye kuendeswa kwechikamu chikuru chevanhu kuBabheri.
Kutapwa kweBhabhironi, kungofanana nekubuda uye kupera kwesungano, inguva yakakosha munhoroondo yeIsrael. Zvakawanda kupfuura chiitiko chimwe chete chakaitika, anova mupenyu, ane ndangariro. Nenzira inosiririsa asi isingabereki, Israeri anosvika pakuziva Ishe wake uye nenzira itsva. Ishe havana kusungirirwa kutembere, guta, nyika kana vanhu. Israyeri, pachikamu chake, anodzidza kutenda pasina kutora chero mukana. Yakagara panzizi dzeBabironi, kunze kwenyika, ichazadza uye ichidzidza kuvimba muna Mwari chete.
Kamwe iyo njodzi yekuparadza nekutapwa ichangoitika, matauriro evaporofita vazhinji anochinja. Ezekieri, uyo akararama panguva imwe chete naJeremia uye anoparidza pakati penhapwa, iye zvino achakurudzira zvikuru uye kudana kuvimba. Anovabatsira kubata nekurasikirwa nenzvimbo uye kunyanya tembere. Zvakare muporofita asingazivikanwe, anonzi deutero-Isaiah, anozivisa meseji yake yekunyaradza panguva iyoyo: kubudirira kwekutanga kwamambo wePezhiya Koreshi nemitemo yake yekuyananisa mucherechedzo kwaari werusununguko rwave pedyo uye kudzokera kuJerusarema.
Kubva kumagumo ekutapwa, vaporofita vanoteedzana pasina nguva chaiyo. Hagai naZekaria vanoperekedza kuyedza kwekutanga kudzoreredza tembere. Muporofita wechitatu asingazivikanwe anobva kuchikoro chaIsaya, mutatu-Isaya, anotaura kunhapwa dzakadzoka muJerusarema. Zvino kwouya Maraki, Obhadhiya, Joere.
Kuguma kwechiporofita chemuBhaibheri kunotanga kubva muzana ramakore rechitatu. Israeri ikozvino haina zvapupu zviri pamutemo zveshoko raMwari. Zvishoma nezvishoma vanhu vari kutarisira kudzoka kwevaporofita kana kuuya kwemuporofita (cf. Dt 18, 13-18). Iyi tarisiro iripowo muTestamente Itsva. Jesu anozivikanwa semuporofita uyu aifanira kuuya. Chechi yekutanga, nenzira, yaona kumutsidzirwa kwechiporofita. Kunyangwe vese vachigamuchira mweya sekuzadzikiswa kwechiporofita chaJoere (cf. Mabasa. 2,17-21), vamwe vanonyatsodaidzwa kuti vaporofita.
Ivo ndivo vaturikiri veshoko raMwari kuungano yechiKristu. Kuporofita kunogona kunge kwakanyangarika muchimiro chayo chepamutemo, nerombo rakanaka, Chechi ine vanhu vanoziva nguva dzese avo, maererano nevaporofita vemuBhaibheri, vakagadzirisa zvinoshamisa kupihwa kwaMwari uye kugona kuidavirira. (CCV mapeji 63-66)
Chirevo Chechiporofita Chemvura Yemvura Nemvura
Chiporofita Uye ZveMweya Zvinoreva Zvemadhadha
CHIPROFITA ​​UYE ZVINONZI MUDZIMU WEMAHARA OWLS
Vaporofita Varevereri MuBhaibheri